विचार - बैशाख ५, २०७६, बिहिबार, रामधुनी
घर छेउकै विद्यालय नपढि बसमा चढेर घण्टौ टाढाको बोर्डिङ् स्कुलमा जाने विद्यार्थीको भिड देख्दा अचम्म लाग्छ । भौतिक र पूर्वाधारयुक्त विद्यालय, दक्ष एवम अनुभवि शिक्षक र शान्त विद्यालयको वातावरण हुदाँहुदै पनि सामुदायिक विद्यालय पछिल्लो समय विद्यार्थीको गन्तब्य बन्न छाडेको छ । करिब १ दसक अगाडि सम्म सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको भिडम्भिड हुन्थ्यो । कमशः विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै गयो । बिगत केहि बर्ष यता त विद्यार्थीको सङ्ख्या झनै न्युन भएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयले जतिनै शैक्षिक सुधार गरेता पनि अभिभावको आकर्षण भने बढ्न सकेको छैन । रामधुनी नगरपालिका वडा नं १ मा रहेको जनसेववा आधारभुत विद्यालयकै कुरा गरौँ जहाँ ५ कक्षा सम्म पढाइ हुन्छ । भौतिक संरचना पनि राम्रै छ । बिकट ठाउँ पनि होइन । २ जना स्थायि शिक्षक सहित ५ जना जनशक्ति पनि छन् । तर त्यहाँ जम्मा ५ जना मात्र विद्यार्थी छन् । यो त एउटा प्रतिनिधि विद्यालय मात्र हो अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको अबस्था यस्तै छ । सम्पूर्ण सुबिधा हुँदाहुँदै पनि सामुदायिक विद्यालय प्रति अभिभावको बितृण किन बढेको होला त ?
यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । सामुदायिक विद्यालय पछिल्लो समय विद्यार्थीको भोको बन्दै गएको छ । बास्तममा निति नियमलाई हर्ने हो भने । प्रथमिक तहमा २०० जना विद्यार्थी अनिबार्य हो । त्यसमा पनि तराइ क्षेत्रमा १ शिक्षक बराबर ५० जना विद्यार्थी हुु पर्ने । तर अधिकांश तराइका सुगम मानियका ठाउँमा पनि मापदण्ड भन्दा कम विद्यार्थी र आबस्यकता भन्दा बढि नै शिक्षकहरु छन् ।
तर अपवाद बाहेक प्राय निजि विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या अत्यन्तै धेरै छ । पहिले सामुदायिक विद्यालयको कथा छुट्ट्टै थियो । निजि विद्यालय पनि खासै थिएनन् । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर पनि राम्रै थियो । तर पछिल्लो समयमा निजि विद्यालय धमाधम खुल्न थाले । निजि विद्यालयका संचालकले सामुदायिक विद्यालयको बद्नाम गदै आफुतिर विद्यार्थी तान्न थाले । उनीहरुले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर छ भन्ने भ्रम फिजाए । त्यहाँ अध्यापन गराउँने शिक्षकहरु अदक्ष्य छन् भन्दै हिड्छन् उनीहरु । अनेक प्रचार गरेर उनीले विद्यार्थी तानिरहे तर सामुादयिक विद्यालय तान्न असफल भयो ।
अनेकौ प्रचार गरेर शिक्षालाई ब्यवसाय भन्दा पनि माथि लगेर ब्यापारमा परिणत गरिसकेका छन् उनीहरुले । यो वा त्यो बहानमा तोकिएको मापलण्ड भन्दा बढि शुल्क लिएर विद्यालय संञ्चालन गर्नेको सङ्ख्या कम छैन । निजि विद्यालयका संचालकहरुले शैक्षिक गुणस्तर राम्रो छ भन्ने बाहानामा अभिभावको ढाड सेकेका हुन । तर कुन अर्थमा शैक्षिक गुणस्तर राम्रो छ ? शैक्षिक गुणस्तर राम्रो भएर आज सम्ममा के परिणाम प्राप्त भएको छ ? निजि विद्यालयः जहाँ अध्यापन गराउँने शिक्षकको कुनै शैक्षिक योग्यता मापन गरिदैन । आफ्नी श्रीमती, छोरी, साली, भतिजी र अन्य आसेपासेलाई शिक्षक नियुक्त गरिन्छ । त्यहाँ कहाँबाट आयो शैक्षिक गुणस्तर ?
सम्पुर्ण शैक्षिक तह पार गरेर सरकार द्धारा गठित शिक्षक सेवा आयोग पास गरेर आएको सामुदायिक विद्यालयको योग्य शिक्षकले चै गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्ने अनि निजि विद्यालय संचालकको नातेदार भएकै भरमा अध्यापन गराउँन आएको शिक्षकले चै गुणस्तरीय शिक्षा दिने भन्ने सवाल रहन्छ ? आम अभिभावको बुझ्नै पर्ने कुरा दक्ष शिक्षकले गुणस्तरहिन र अदक्ष शिक्षकले गुणस्तरीय शिक्षा दिने भन्ने सवाल रहन्छ ?त्यो अदक्ष मान्छे जो नाता केलायर पढाउँन आएको छ , उसले कसरी जान्दछ र बढाउँनु ?
निजि विद्यालयमा राम्रो र गुणस्तरीय शिक्षा पाइन्छ, सामुदायिकमा पाइदैन भन्न सक्ने मुर्ख विद्धानहरुले कि त शिक्षक सेवा आयोगको परिक्षा प्रणलिलाई नै चुनौति दिन सक्नु प¥यो ? होइन भने सामुसदायिक विद्यालय भन्दा निजिले गुणस्तरिय शिक्षा दिन्छ भन्ने कुरा गर्नु भएन । अहिले निजि विद्यालयका शिक्षक माथि अनुगमन गर्ने हो भने संचालकका नातेदार बाहेक कोहि पनि शिक्षक छैनन् ।
वास्तममा निजि विद्यालय भनेको अभिभावक सँग पैसा असुल्ने थालो मात्र हो । जहाँ गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा गर्नुको कुनै औचित्य छैन । त्यो त केवल सम्पन्न परिवारका ब्यक्तिहरुले पैसा धेर भएर छोराछोरी पढाउँने ठाउँ हो । गरिव र जेहेन्दार विद्यार्थीको त्यँहा न स्थान छ न भबिष्य छ । केवल अंग्रजी माध्यममा बढाउँने भएकाले उनीहरु अभिभावकलाई झुक्याउँन सफल छन् ।
निजि विद्यालयको ब्रह्मलुटको कारण आज बालबालिकाले पाउँनु पर्ने भनिएको निशुल्क शिक्षाको नारा केवल कागजमा सिमित भएको छ । होला देशमा धेरै बालबालिकालाई निजि विद्यालयले पढाएको होला तर पनि कति अनुमति विना नै संञ्चालित छन् । दर्ता बिनानै संचालित छन् जसले भोलि बालबालिकाकौ शैक्षिक भबिष्य माथि नै खेलबाड गरिरहेका छन् ।
आम अभिभावको गुनासो छ । निजि विद्यालयमा छोराछोरी पढाउँन सकिएन, सामुदायिकमा राम्रो गुणस्तर नै छैन । तर त्यो भ्रम हो । सामुदायिक विद्यालयमा राम्रो शैक्षिक गुणस्तर छ । त्यहाँ दक्ष शिक्षकहरु छन् । जुन सर्टिफिकेट बिश्वबजारमा बिक्न सक्ने खालको छ । होला , सामुदायिक विद्यालयमा ब्याबस्थापनको अभाबमा केहि कमिकमजोरी होलान । जसलाई समुदायले खबरदारिका साथ सुधार्न सक्छ । तर निजि विद्यालयमा धेरै कमिकमजोरी छन् । जसलाई समुदायले त के सरकारले पनि सुधार्न सक्दैन । उनीले सरकारको निर्णयलाई बेलाबेलामा चुनौति पनि दिने गरेका छन् ।
अव तत्कालका लागि सरकारले अनुमति बिना चलिरहेका र चर्को मुल्य लिइरहेका निजि विद्यालयलाई कारबाहिको दाहेरामा ल्याउँनु पर्दछ । शैक्षिक क्षेत्रलाई जुनसुकै हालतमा पनि सरकारले निशुल्क बनाएर बालअधिकारको संरक्षण गर्नु पर्दछ । अनेक बाहानाबाजि गरेर निजि विद्यालयको मुल्य बृद्धिमा नियमनकारी निकाए मौन बस्न मिल्दैन । निजि विद्यालय संचालकको विद्यालय प्रतिको लगानिलाई पनि सम्मान गर्ने कुरालाई सरकारले बिर्षनु हुदैन । यसमा अभिभाबकले पनि बुझेर आफ्ना बालबालिकाको भबिष्यलाई ध्यानमा राखि निशुल्क शिक्षा पाउँने बालबालिकाको अधिकारलाई सम्मान गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना बालबालिकालाई पढाउँनु आबस्यक छ ।